Jirama Toamasina: manohy ny asa fiambenany ny ProGsi - ewa.mg
News - Jirama Toamasina: manohy ny asa fiambenany ny ProGsi
Tonga teto Toamasina ny iraky ny fitantanana foibe ny Jirama avy any Antananarivo, omaly talata, nihaona tamin’ny tompon’andraikitry ny orinasa ProGsi, miandraikitra ny fiambenana ny Jirama aty Toamasina. Voalaza fa antondian’izy ireo ny hanala ity orinasa ity, tsy hisahana izany fiambenana izany intsony. Nilaza ny tompon’andraikitry ny ProGsi, Rakotoniahy Josephat, fa “tsy olana amin’izy ireo ny hiala, saingy takiny ny taratasy ara-dalàna milaza izany fifanarahana arak’asa izany, saingy tsy nisy”. Nomarihiny fa “tsy mbola tapitra ny fe-potoana nifanarahany amin’ny Jirama, ary vao nohavaozina ihany koa. Tsy mbola voaloan’ny Jirama koa ny karaman’ny ProGsi, tao anatin’ny valo volana. Amin’ny maha mangarahara, tsy nisy koa ny antso tolobidy (appel d’offre) ho an’izay hiandraikitra ny fiambenana raha toa ka foanana ny fifanarahany”.
Taorian’ny fihaonan’ny roa tonta, fantatra, afaka manohy ny asany ihany ny ProGsi.
Hentitra amin’ny fiambenana
Sarotiny ity orinasa ity amin’ny fanatanterahany ny asa. Hentitra ny fisavana ny olona mivezivezy ao anatain’ny Jirama. Maro ireo mpiasan’ny Jirama tratra nangalatra, amina tapitrisa ny tentimbidin’ny entana tratra, toy ny taribin-jiro, ny kaontera, fitaovana samihafa. Saron’ity orinasa tsy miankina ity koa ny fifanarahana hafahafa nataon’ny tompon’andraikitry ny Jirama sy ireo mpangalatra fitaovana tany Ambodilazana. Nahatratra 207 litatra ny gazoala tratran’ny mpiambina nangalarin’ny mpiasa, ny taona 2014.
L’article Jirama Toamasina: manohy ny asa fiambenany ny ProGsi a été récupéré chez Newsmada.
Kung fu Wushu : hisy fiofanana mialoha ny fifaninanana nasionaly
Taorian’ny nahavitan’ny fifidianana ny hitantana ny federasiona malagasy ny kung fu Wushu, ho an’ny taona 2021-2025, efa misy sahady ny programa an-dalam-panomanana amin’izao, raha ny nambaran’ny fi­lohan’ny federasiona, Rama­herison José (maitre Gao). Efa fantatra fa ny volana aogositra izao ny hanaovana ny fiadiana ny tompondaka an’i Madagasikara eo amin’ity taranja ity. Mialoha izany anefa, tsy maintsy hisy fampiofanana omena ny komity teknika, hatsangana tsy ho ela. Ankoatra izay, hisy teknisianina telo halefa hanaraka fiofanana mandritra ny telo volana any amin’ny Temple de Shaolin. Fampiofanana nentin-drazana, “shaolin” ary ara-teknika ny hatrehin’izy ireo any an-toerana. Mande­ha avy hatrany ireo olona telo ireo raha vao misokatra ny sisin-tany, raha ny fanazavana. Tsiahivina fa efa tafatsangana tanteraka ny birao mandrafitra ny federasiona, misy mpikambana miisa 12. Hahi­tana ny filoha, ny filoha lefitra miisa telo, ny sekretera jeneraly iraisam-pirenena, ny sekretera jeneraly nasionaly, ny mpanolotsaina manokana, ny mpanolotsaina mpanampy miisa telo, ny komisiona teknika ary ny mpitantambola miisa roa.Mi.RazL’article Kung fu Wushu : hisy fiofanana mialoha ny fifaninanana nasionaly a été récupéré chez Newsmada.
Antaninarenina: « Tsenaben’ny Fizahantany, II »
Hatao, ny 10 hatramin’ny 12 marsa ho avy izao, ny hetsika « Tsenaben’ny Fizahantany », andiany faharoa. Toy ny andiany voalohany, natao ny novambra 2020, etsy amin’ny zaridainan’Antaninarenina ny toerana hikarakarana azy. Manodidina ny 5 000 ny mpitsidika andrasana mandritra ireo telo andro ireo, tsy misy vidim-pidirana fa maimaimpoana.Mikarakara azy ny minisiteran’ny Fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetr’andro (MTTM), hanohanana ny mpandraharaha sy ny orinasa eo amin’ity sehatra ity. Tanjona ny hanomezana tolotra manokana ny mpanjifa, toy ny fampihenam-bidy hatrany amin’ny -50%.Fotoana ihany koa ahafahan’ny mpandraharaha any amin’ny faritra mampahafantatra ny mampiavaka azy avy. Nitombo ho 41 ny mpandray anjara amin’ity andiany faharoa ity, raha 30 tamin’ny andiany voalohany ny taona 2020.Njaka A.L’article Antaninarenina: « Tsenaben’ny Fizahantany, II » a été récupéré chez Newsmada.
Filohan’ny Holafitry ny farmasianina: “Tsy azo hihodivirana ny fiakaran’ny vidim-panafody ato ho ato”
Manana andraikitra goavana amin’ny fiatrehana ny valanaretina Coronavirus ny farmasia. Mitondra fanazavana momba ny ezaka efa nataon’ny farmasianina ny filohan’ny Holafitry ny farmasianina eto Madagasikara, Rakotomalala Tantely. Gazety Taratra (*) : Inona ny fandaminana vaovao nampiharina tsy hahatapaka ny famatsiana fanafody eny amin’ny farmasia ?Rakotomalala Tantely (-) : Zava-dehibe tokoa amin’izao fiatrehana ny ady amin’ny valanaretina izao ny ezaka rehetra ka tsy hisy fahatapahana ny famatsiana fanafody. Manaraka akaiky ny fanafarana sy ny famatsiana ny fanafody ilaina amin’ny fitsaboana ny coronavirus izahay ary miara-miasa amin’ireo mpamongady. Nangataka tamin’ny fanjakana koa ny fanamorana ny fanafarana, ny fandalovan’ny fanafody eny amin’ny seranam-piaramanidina sy ny seranan-tsambo ary ny fitaterana ny fanafody, indrindra ireo ilaina maika. Miangavy ny farmasianina izahay hitandrina ka ny marary tena mila azy no hisitraka ny fanafody fa tsy ny mpanararaotra.*Nisy fangatahan’ny mpanjifa hampitomboina isa ny farmasia misokatra amin’ny alina tsy hampivezivezy ny marary– Nitombo ny isan’ny farmasia mpiandry raharaha eny amin’ny faritra rehetra nahitana fa nirongatra ny valanaretina toy ny eto Antananarivo, Toamasina, Mahajanga. Ho an’Antananarivo Renivohitra manokana, nitombo ho 10 ny farmasia miandry raharaha, misokatra ny alina raha dimy monja izany teo aloha. Ireo farmasia manodidina an’Antananarivo, mitohy misokatra 24/24. Eto Antananarivo, maro ny farmasia miandry raharaha, ny asabotsy hariva sy ny alahady maraina (mizara ekipa roa ireo farmasia ka ny ekipa iray miasa asabotsy hariva, ny ilany miasa alahady ary mifamadika ny herinandro manaraka). Mitombo manaraka izay mety ho filan’ny mponina ny any amin’ny toerana hafa rehetra any amin’ny faritany : Toamasina, Mahajanga, Fianarantsoa, Antsiranana, Nosy-Be. Ezaka natao ireo izay tsapa fa mavesatra ihany satria ahitana marary koa ny ekipa anatin’ny farmasia mpiara-miasa indraindray. Hisaorana ny farmasianina ny fifanampiana miatrika ny asa na tsy mora aza.*Ary mba manao ahoana kosa àry ny vidim-panafody ?– Nisy tamin’ireo mpamongady fanafody nanapa-kevitra ny hanafatra fanafody sasany amin’ny fiaramanidina satria miara-manaiky isika fa vonjy aina izy ity. Zava-dehibe voalohany ny fisian’ny fanafody hoentina mitsabo. Ireny kazarany ireny no mety ho tratran’ny fiakaram-bidy fa tsy ny fanafody rehetra. Ankoatra izay, mitohy ny asa fanafarana izay ny ankamaroany mandeha sambo. Misy fahalalahana ny sehatry ny fanafody ka misy ireo fanafody “génériques” vokarin’ny “laboratories” isan-karazany ka mety ho samihafa ny vidiny. Ny fanafody “spécialités” avy any amin’ny firenena tandrefana mety ho lafo kokoa. Ohatra na samy vitamine C aza mety ho samihafa ny vidiny arakaraka izay “laboratories” nanao azy. Samy maka ny tandrify mety aminy na ny marary na ny mpitsabo, saingy amin’ny fotoana sarotra toy izao, mety tsy hisy loatra ny safidy indraindray. Tsy misy finiavana hampiakatra ny vidim-panafody avy amin’ny farmasianina fa rehefa misy fiovan’ny sandam-bola, mety hisy fiantraikany amin’ny vidim-panafody ihany koa izany satria anarivony ireo karazam-panafody kirakiraina eny amin’ny farmasia.*Ny fepetra raisin’ny holafitra manoloana ireo mpanararaotra amin’ny vidim-panafody?– Ny andraikitry ny holafitra mijanona hatreny amin’ny farmasia ihany. Fahadisoana ny manararaotra ny zava-misy hanaovana vidiny mihoa-papana. Raha voaporofo fa nisy farmasianina nanao izany, azon’ny holafitra hangatahana fanazavana izy ary alefa eo anatrehan’ny “conseil de discipline” raha tena nisy ny fahadisoana. Fantatra anefa fa misy ny “dépots de médicaments » sasany mety manararaotra. Eo koa ireo varotra tsy ara-dalàna eny amin’ny tambajotran-tserasera mampiakatra be ny vidim-panafody.Nangonin’i Vonjy A.L’article Filohan’ny Holafitry ny farmasianina: “Tsy azo hihodivirana ny fiakaran’ny vidim-panafody ato ho ato” a été récupéré chez Newsmada.
Mirongatra ny halatra lavanila: roa lahy tratran’ny polisy tao Vavatenina
Mampitaraina ny mponina ao amin’ny distrikan’Analanjirofo ny fisiana mpangalatra lavanila maitso, tato ho ato. Tapitra raofin’ireo olon-dratsy ireo ny voly kely harin’ireo olona ao an-toerana ka nahatonga ny polisy nandray andraikitra. Raikitra ny vela-pandrika nataon’ny CSPD ao Vavatenina ka tra-tehaka teo am-piotazana ny lehilahy iray, ny 11 marsa lasa teo. Nitsoaka ireo olon-dratsy ireo, saingy tsy lasa lavitra ka izao voasambotra izao. Tetsy ankilany, saron’ny polisy teo am-pamakiana trano koa ny lehilahy iray hafa. Samy notanan’ny polisy izy roa lahy ireo amin’izao fotoana izao.Tsiferana RandriatianaL’article Mirongatra ny halatra lavanila: roa lahy tratran’ny polisy tao Vavatenina a été récupéré chez Newsmada.